Orinasa mitodika any amin'ny tambajotra sosialy anatiny | Martech Zone
Alarobia, Jona 18, 2008 Alahady, Aogositra 23, 2009 Douglas Karr
Misy fampahalalana marobe momba ny tambajotra sosialy rehetra an-tserasera, saingy nisy hetsika natao mba hitondrana ny sasany amin'ireo tombony azo amin'ny tambajotra sosialy ao amin'ny Intranet. Nanao fikarohana momba ilay lohahevitra aho nandritra ny fizarana tambajotran-tserasera antsasaky ny andro niresahako tamin'ny IABC omaly ary mendrika ny hojerena lalindalina kokoa ny voka-pikarohana. Tsy maintsy nandavaka lalina aho mba hahitana fampahalalana sy pikantsary, saingy misy vitsivitsy loharano any izay mikendry ny Intranet.
Ny Intranet dia tena nibontsina sy maty tamin'ny ankamaroan'ny orinasa talohan'ny teknolojia Web 2.0. Mampalahelo, satria orinasa maro no miantoka ny hevitra tsy hiverenany intsony raha tsy mahomby. Ny Intranets tany am-boalohany dia tsy inona fa ny mpanorina pejy web tsy misy fotony izay tsy maintsy nampiasain'ny sampana tsirairay hamoahana vaovao sy vaovao, tsy misy loharano na automatique. Microsoft dia nanangana ny Sharepoint, saingy ny ezaka ilaina hanamboarana sy hitazomana ny atiny dia mbola mihoatra ny haavon'ny fahaiza-manaon'ny mpiasa antonony.
Amin'ny fiavian'ny Google Apps, Tambajotra sosialy, Wikis, Windows Sharepoint Services 3.0 ary fitaovana fiaraha-miasa sy tambajotra hafa, fotoana izao hamerenan'ny Intranet.
Raharaham-barotra amin'ny tambajotra sosialy anatiny
Araho ary atreho ny paikadin'ny orinasa - miantoka ireo mpiasa, ekipa ary tetikasa mifanaraka amin'ny vinan'ny orinasa.
Hierarchy an'ny orinasa manidina - manome lalana mivantana avy amin'ny CEO hatramin'ny mpiasa ambany indrindra ary ny mifamadika amin'izany. Izany dia mitarika amin'ny fanatsarana ny fifandraisana, ny mangarahara, ny fahatokisana ary fanomezana hery ny mpiasa.
Mampiroborobo ny tambajotra anatiny - manome ny mpiasa fitaovana hitadiavana mpiasa hafa manana tombontsoa iraisana na ao anatiny na any ivelan'ny orinasa - fanatanjahan-tena, Fiangonana, fialamboly, sns. Ny fananana mpiasa mifamatotra mafy dia mitarika fitomboan'ny fahafaham-po sy fitazomana ny mpiasa.
Hevitra - Taranaka hevitra - ny fitaovana hiteraka hevitra dia mahazatra mandritra ny intranet vitsivitsy an'ny orinasa lehibe. Fitaovana toy ny Digg amin'ny fampiroboroboana hevitra ho an'ny tena vola sy loka hafa dia mahazatra.
Vaovao sy fampahalalana - mizara vaovao momba ny orinasa sy ny mpiasa ary ny fanambarana an-gazety.
Resources - manome trano famakiam-boky, fampianarana, fitaovana marketing, antontan-taratasy momba ny vokatra, fanampiana, paikady, tanjona, teti-bola sns.
Fizarana fahalalana sy fiaraha-miasa - manome wiki sy fampiharana zaraina hanatsarana ny hafainganan'ny tetik'asa, antontan-taratasy sns.
Mpiasa miasa miorina amin'ny tetikasae - manome fitaovana ho an'ny mpiasa handaminana ivelan'ny toerana ara-batana, ny haavon'ny fahaiza-manao, ny departemanta sns. Ny fahafaha-mikaroka sy mahita mpiasa manan-danja hanala ny rojom-baiko amin'ny fizotrany, ahafahan'ny ekipa virtoaly mandamina sy manatanteraka haingana.
Tamin'ny fandinihana ny harato, nisy 'tsiro' marobe momba ny fomba fampiasan'ny orinasa tambajotra amin'ny alàlan'ny intranet -ny ary milaza ny toetran'ireo orinasa sy ny fitaovan'izy ireo. Azafady mba atoroy kely amiko ny zavatra hitako eto - satria tsy manana fidirana mivantana amin'ny Google, Microsoft, Yahoo ary IBM aho, miasa amina lahatsoratra sy pikantsary mety herinandro maromaro… na taona!
Ny Moma an'i Google dia tsy milina fikarohana tsotra, mamela an'i Moma hanoratra sy hofaritana ary koa fananana nomerika ny loharanon'olombelona. Avy amin'ny tranokala sasany novakiako, Google dia manana rafitra fanaraha-maso kaody mifototra amin'ny tranonkala antsoina koa Mondrian.
Yahoo! Backyard dia toa mampiseho mazava ny filazan'izy ireo ny iraka ary koa mandamina fitaovana manohana an'io fanambarana io ho hitan'ny mpiasan'izy ireo. Somary gaga aho fa tena tsara ny endrik'izy io - ary, raha jerena ny fanamby nataon'i Yahoo amin'ny fananana paikady dia tsy azoko antoka hoe ohatrinona no vokany.
Ao amin'ny fikambanana lehibe toa an'i IBM, miaraka amina mpiasa ana hetsiny, mety tsara ny mametraka tranokala ahafahan'ny olona mahita azy ireo! Ny Beehive dia toa loharanom-pahalalana tsara ho an'ny mpiasa hamantatra sy hitadiavana mpiasa hafa.
Ny tranokalan'i Microsoft dia toa mifantoka amin'ny loharanom-pahalalana ho an'ny mpiasan'izy ireo amin'ny vokatra sy serivisin'izy ireo. Vao haingana indrindra anefa dia nanomboka ny Microsoft Townsquare - fampiharana ara-tsosialy ho an'ny tambajotra sy fiaraha-miasa.
Tsy mila orinasa lehibe ianao hampiditra fitaovana miaraka amin'ny fizotran'ny asanao. Tao amin'ny orinasako dia nifindra monina tanteraka izahay Google Apps ary natambatra mihitsy aza Salesforce.
Jun 18, 2008 ao amin'ny 11: 40 PM
Hey Doug, lahatsoratra mora ampiasaina - ao amin'ny orinasako dia nifindra tany amin'ny Google Apps izahay. Tena mora ampiasaina. Ka ho an'ny tanjon'ny resaka anaty sy zavatra toa izany dia lehibe. Ny kalandrie sy ny dokam-barotra dia tsara ihany koa ho an'ny tanjona anatiny. Nahita glitch kely anefa aho. Amin'ny maha orinasa haino aman-jery anay, miasa amin'ny tetikasa marobe izahay ary hitako fa tsy mila olon-kafa hahazo vaovao momba ny tetikasako rehetra aho. Nifindra tany izahay Deskaway ary hitako fa amin'ny fotoana rehetra dia mahatsiaro tena ho voafehifehy bebe kokoa aho. Fanampin'izany misy ny fizarana fampitaovana ao anatin'ny tetikasa tsirairay mba hahafahako mizara bilaogy sy rakitra sns - mitazona ireo zavatra voasokajy ao anaty tetikasa - ary ny fanadihadiana dia bonus fanampiny. ny zavatra tsy hita ao amin'ny fampiharana dia ny resaka fa ny Google Apps avy eo mihoatra ny manonitra izany. Tsy i DA irery no fitaovana - Zres sy Wrike ary Basecamp sns. - saingy hitako fa tena mitombina ny Deskaway - $ 10 - $ 25 - miankina amin'ny filanao ary manana interface SUPER koa - efa nanandrana fitaovana toa izany ve ianao?
TIAVO NY ZAVA-DEHIBE IZAO NO NAMPIDIRANAO VIDEO VIDEO
Sep 6, 2008 amin'ny 11: 37 AM
Misaotra Aditya, mpankafy Seesmic be aho!
Sep 5, 2008 ao amin'ny 12: PM PM
tsara ny lahatsoratra Malahelo ny iray ianao izay nitombo ara-organika, natsangan'ny mpiasa roa mampiasa sehatra open source sy ny fampandrosoana (drupal) ary ohatra tsara amin'ny fomba fanoherana ny ambony ambany. Blueshirtnation.com, tambajotra sosialy anatiny an'ny Best Buy. Gary Koelling sy Steve Bendt no mpamorona. Rohy sasany….
Lahatsoratra momba ny Blueshirtnation
Voatonona ao amin'ny bokin'i Charlene Li, "Groundswell" ihany koa izy ireo.
Sep 6, 2008 amin'ny 11: 28 AM
Misaotra! Tena manitikitika ny saina raha toa ka mandray ny andraikiny ny mpiasa tena izy hanangana tambajotra sosialy. Handinika izany aho.